सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ : छु’रीले मसाज गरेर यस्तो ग’म्भीर रो’गको उपचार ! थाहा पाउदा सबै चकित ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ : छु’रीले मसाज गरेर यस्तो ग’म्भीर रो’गको उपचार ! थाहा पाउदा सबै चकित !
एजेन्सी । छु’रीले जीउको मसाज गर्ने भन्ने कुरा सुन्दा आ’ङै सि’रिङ्ग हुन्छ । तर यो दुनियाँमा एउटा यस्तो परम्परा छ, जहाँ छु’रीले मसाज गरिन्छ । ताइवानमा विगत २ हजार वर्षदेखि छु’रीले जीउमा मसाज गर्ने परम्परा चलिरहेको छ । अहिले पनि ताइवानका विभिन्न मसाज पार्लरहरुमा नाइफ थेरापी अर्थात् छु’रीको मसाज पनि हुन्छ । छु’रीले मसाज गर्ने त्यस्तो परम्परालाई स्थानीय भाषामा डाउलियाओ भनिन्छ ।
अस्पतालले मृत घोषणा गरेको विरामी जिउँदै भएको भन्दै आफन्तद्वारा अस्पताल घेराउ